Malunga nathi -Beijing JCZ Technology Co., Ltd.
Beijing JCZ Technology Co., Ltd. eyaziwa ngokuba JCZ yasekwa ngo-2004 Kuyinto ishishini eliphezulu-zobugcisa eyaziwayo, elizinikezele unikezelo laser umqadi kunye nolawulo ezinxulumene nophando, uphuhliso, imveliso kunye nokudibanisa. Ngaphandle kweemveliso zayo eziphambili ze-EZCAD yenkqubo yolawulo lwe-laser, ekumgangatho ophambili kwimarike e-China nakumazwe aphesheya, i-JCZ ivelisa kwaye isasaza iimveliso ezahlukeneyo ezinxulumene nelaser kunye nesisombululo sabadibanisi beenkqubo zelaser zehlabathi njengesoftware ye-laser, isilawuli se-laser, i-laser galvo Iskena, umthombo we-laser, i-laser optics ... Kude kube ngunyaka we-2019, besinamalungu ali-178, kwaye ngaphezulu kwama-80% abo bebengamagcisa anamava asebenza kwiR & D nakwisebe lenkxaso yezobugcisa, ebonelela ngemveliso ethembekileyo kunye nenkxaso yezobuchwephesha ephendulayo.
Ngeenkqubo zethu zokuqala zokuvelisa kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo kuyo yonke inkqubo yokuvelisa, zonke iimveliso zifike kwiofisi yomthengi ziphantse zaneziphene. Imveliso nganye ineemfuno zayo zokuhlola, kuphela yimveliso eyenziwe yiJCZ, kodwa ezo ziveliswa ngamaqabane ethu ngokunjalo.
Kwi-JCZ, ngaphezulu kwe-50% yabasebenzi basebenza kwisebe le-R & D. Sineqela lobuchwephesha bombane, oomatshini, i-optical, kunye neenjineli zesoftware kwaye sityale imali kwiinkampani ezininzi ze-laser ezaziwayo, ezisenza ukuba sikwazi ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo kumhlaba wokulungisa i-laser ngexesha nje elifutshane.
Ngeqela lethu elinamava lenkxaso yezobuchwephesha, inkxaso ephendulayo kwi-Intanethi inokunikezelwa ukusuka kwi-8: 00 ukuya kwi-11: 00 Pm UTC + ixesha eli-8 ukusuka ngoMvulo ukuya ngeCawa. Ukuxhaswa kweeyure ezingama-24 kwi-Intanethi kuya kubakho emva kokuba i-JCZ yase-US isungulwe kungekudala. Kwakhona, iinjineli zethu zineVisa yexesha elide kumazwe aseYurophu, eAisa naseMntla Melika. Ukuxhaswa kwesiza kunokwenzeka.
Iimveliso zeJCZ zikwisikhundla esiphambili kwimarike, ngakumbi ukumakisha i-laser, kwaye inani elikhulu lamalungu e-laser (iiseti ezingama-50,000 +) zithengiswa minyaka le. Ngokusekwe koku, kwiimveliso esizivelisileyo, indleko zethu zemveliso zikwelona nqanaba lisezantsi, kwaye kwabo babonelelwe liqabane lethu, sifumana elona xabiso kunye nenkxaso. Ke ngoko, ixabiso elinokhuphiswano kakhulu linokubonelelwa yiJCZ.
I-R & D NEENJINI ZENKXASO
Saqala ukusebenzisana ne-JCZ kwi-2005. Yayiyinkampani encinci kakhulu ngelo xesha, yayingabantu abali-10 kuphela. Ngoku i-JCZ yenye yeenkampani ezidumileyo kwicandelo le-laser, ngakumbi ukumakisha i-laser.
-U-Peter Perrett, abahlanganisi benkqubo yeLaser esekwe e-UK.
Ayifani nabanye abathengisi baseTshayina, sigcina ubudlelwane obusondeleyo kunye neqela lehlabathi leJCZ, ukuthengisa, iR & D, kunye neenjineli zenkxaso. Sidibene neenyanga ezimbini zoqeqesho, iiprojekthi ezintsha, kunye nokusela.
-Umnu Kim, uMseki wenkampani yenkqubo yelaser yaseKorea
Wonke umntu e-JCZ ndiyazi uthembekile kwaye uhlala ebeka umdla wabathengi kuqala. Ndenza ishishini kunye neqela lehlabathi leJCZ phantse iminyaka eli-10 ngoku.
-UMnu Lee, i-CTO yenye yeenkampani zenkqubo yelaser yaseKorea
I-EZCAD yisoftware entle enemisebenzi enamandla kunye nesixhobo sokusebenziseka lula. Kwaye iqela lenkxaso lihlala liluncedo. Ndixela nje umba wam wobuchwephesha kubo, baya kuwulungisa ngexesha elifutshane kakhulu.
-UJosef Sully, Umsebenzisi we-EZCAD oseJamani.
Kwixesha elidlulileyo, ndathenga abalawuli kwiJCZ kunye nezinye izinto kwabanye abathengisi. Kodwa ngoku, i-JCZ ngumthengisi wam ndedwa koomatshini be-laser, ebiza kakhulu. Okona kubaluleke kakhulu, baya kuvavanya onke amalungu ngexesha elinye ngakumbi ngaphambi kokuhambisa ukuze baqiniseke ukuba akukho siphene xa kufikwa kwiofisi yethu.
-Vadim Levkov, Umdibanisi wenkqubo ye-laser yaseRussia.
Ukukhusela ubumfihlo babathengi bethu, igama esilisebenzisileyo liyinto ebonakalayo.